Imigqomo engu 12 eyi-Best Countertop Compost Yango-2021 - Ukwenza Umquba
Imigqomo engu 12 eyi-Best Countertop Compost Yango-2021
Imigqomo eyi-12 eyi-Best Countertop Compost
1. I-Epica Stainless Bin Compost Bin
2.Polder Ikhishi Composter
3. I-Chef’n EcoCrock Bin Yomquba
4. I-OXO Good Grips Compost Bin
5. Umgqomo Womquba Okhululekile Wensimu
6. Umgqomo Wensimbi Wekhitshi Wekhofi Wethusi
7. UJoseph Joseph Compo Easy-Fill Compost Bin
8. INervpro Floral Blue / White Compost Keeper
9. I-Bamboozle Food Composter
10. Ibhini Yomquba Wekhishi Ogcwele
11. IGreenlid Compostable Compost Bin
12. I-Rock Rock Compost Bin yesithathu
Yini i-Countertop Composter?
Izici Zemigqomo Yomquba
Izindaba: Izinto zokwenziwa komquba
Singabameli abatshisekayo bomquba lapha eCottage, Ekhaya naseNgadini. Futhi njengomuntu oshisekela umquba ngokweqile, ngiqoqa yonke imfucumfucu yami yasekhishini ukuze ngiyifake engxubeni. Nginomgqomo wokuphala wekhompiyutha engiwusebenzisela lowo msebenzi.
Amabhinki omquba wasekhishini awadalwa alingana wonke. Njengoba ikhishi lawo wonke umuntu linokuhlobisa okuhlukile, kunezitayela eziningi. Hhayi kuphela ukuthi kunemigqomo emisha yomquba, kodwa kunezici ezahlukahlukene ongakhetha kuzo.
Ake sihlole ukuthi yini oyidingayo ukuze uthole ibhakede lomquba elilungile lesikhala sakho!
Okuhamba phambili sekukonke Umgqomo Wensimbi We-Epica Engagqwali Okuhamba phambili sekukonke
1.3 usayizi wamalitha
Bheka Intengo yamanje
Khipha ku-internet Silicon Polder Ikhishi Composter Khipha ku-internet Silicon
Usayizi ongu-1 wamalitha
Guqula ukuze kungabi nalutho
Abicah, isitendi sensimbi
Okuhle kakhulu I-Chef'n EcoCrock Umquba Womquba Okuhle kakhulu
.75 usayizi wamalitha
Ipulasitiki Eqinile I-OXO Good Grips Compost Bin Ipulasitiki Eqinile
Hhayi ukugezwa ngomshini
I-Double Pail Umgqomo Wengadi Yomquba Okhululekile I-Double Pail
Usayizi wamalitha angu-0.8
Idizayini yokuvuza evuzayo
Qeda ithusi Umgqomo Wensimbi Wekhitshi Wekhofi Wethusi Qeda ithusi
Insimbi engagqwali w / ithusi qeda
Ukuvulwa Okubanzi UJoseph Joseph Compo Easy-Gcwalisa Umquba Womquba Ukuvulwa Okubanzi
Gcina ngaphakathi kwamakhabethe
Umklamo omuhle INorpro Floral Blue / White Compost Keeper Umklamo omuhle
3 ilitha usayizi
Iqinile futhi ihlala isikhathi eside
Eco-Friendly I-Bamboozle Food Composter Eco-Friendly
Usayizi wamalitha angu-1.25
Isivalo Esivulekile Umgqomo Ogcwele Umquba Wekhishi Ogcwele Isivalo Esivulekile
Usayizi wamalitha angu-1.5
Cindezela inkinobho ukuvula
Umgqomo Ohlanganekayo Umgqomo Womquba WeGreenlid Umgqomo Ohlanganekayo
Umgqomo ongu-6 'x 8.5'
Amakhadibhodi, isivalo sepulasitiki
Ikhishi Chic I-Rock Rock Compost Bin yesithathu Ikhishi Chic
Idizayinelwe ukuhlala isikhathi eside
I-EPICA Insimbi Yensimbi Engagqwali Bin 1.3 Gallon-Ifaka Hlunga Amalahle
UKULAWULA IMIPHUMELELO NGOKWEMVELO: Isivalo somoya futhi ...
INQUBO YOKUHLANZA OKULULA: I-stainless steel enesitayela ...
YIBEKE NOMA KUKHONA: Usayizi ongu-1 wamalitha mkhulu ngokwanele ...
Yilokhu engikusebenzisayo, futhi bengingeke ngikudele umhlaba.
Ayinayo i-pail yangaphakathi, kepha ngilungile ngalokho. Ukwaneliseka kwami ​​yingoba lo mgqomo wakhiwa ngeshidi elilodwa lensimbi. Awekho amalunga e-weld okuthuthukisa ukugqwala, futhi azikho izindawo ezibuthakathaka ezingavuza. Ukwakhiwa okuqinile.
Ngizovuma ukuthi akuyona inketho ethandekayo emhlabeni. Ingaphakathi lixakaniseka ngemikhiqizo kadoti ehlanganisiwe. Kuzofanele uyihlanze ihlanzeke. Kodwa kulula ukuyihlanza, futhi isivalo silingana ngokuphepha. Kuleso sembozo isihlungi sekhabhoni esisebenza kalula.
Kaningi kunalokho, ngishiya isivalo ngokuphelele. Iningi lemfucumfucu yami yasekhishini ihlanganiswa nezindawo zekhofi, ngakho-ke kukhona ubungozi obuncane bezimbungulu ezakhelene nomgqomo wami. Kepha uma kunenqwaba yemfucumfucu yokudla ngaphezulu, isivalo sigcina izinambuzane nephunga likhona.
icici elihle lezindlebe ezizwelayo
Isibambo sensimbi esiqinile senza kube lula ukufeza umqambi bese usilahla. Uma kukhona okungahambi kahle, ngukuthi uma igcwele ngokuqinile, ngidinga isipuni ukuze ngikhuculule imfucuza - futhi lokho kuyiqiniso nganoma iyiphi ibheyili.
Yebo, kulula kakhulu. Kepha kukho konke ukuthembeka, isitsha sakho semfucuza ekhishini kufanele sibe sikhulu kangakanani?
Ama-Polder Kitchen Composter-Flexible silicone ebhakedeni okufaka ukukhipha nokuhlanza - asikho isidingo ...
I-ONE-GALLON CAPACITY igcina okwesikhashana izinsalela zokudla ...
I-FLEXIBLE PUSH-THROUGH SILICONE BUCKET ifaka ku ...
I-RONSES RONSES ENGAYI-STICK ihlanzekile futhi iwasha ...
Noma ngubani odale lokhu uyazi ukuthi kungacasula kanjani ukukhipha umgqomo opakishwe ngokuqinile. Futhi ngakho-ke bahamba igxathu elidlula esinye isitayela. Lo mgqomo ungaguqulelwa ngaphakathi ngaphakathi.
Yakhiwe ngo-silicone, umgqomo unesibambo esincane ngaphansi kwaso esivumela ukuthi ukhiphele yonke imfucuza ngaphandle. Ngemuva kwalokho ungahlanza ingaphakathi bese uliphonsa ngapha nangapha futhi, kwenze kube lula kakhulu ukugcina kuhlanzekile.
Futhi iyagezwa ngomshini, inketho iningi labanye abakhiqizi abangenayo. Kepha kukhona ukubuyela emuva. Kubukeka ngokungajwayelekile, futhi kungahle kungahlangani nokuhlobisa kwakho kwasekhishini. Uhlaka lwentambo olusekela ibhakede lubonakala kancane ku-silicone ompunga.
Uma lokho kungeyona inkinga kuwe, lokhu kungenzeka ukuthi yibheyili yomquba elula kunazo zonke ongayitholela ikhishi lakho. Futhi kuwufanele wonke amasenti.
IChef'n 401-420-120 EcoCrock Counter Compost Bin Emnyama / Emhlophe 3.3 ilitha 1
IDizayini Yesikhashana: I-3 litre yanamuhla (0.75 amalitha) ...
EKHAYA: Idizayini yamabhakede amabili enesimo sangaphakathi esikhiphekayo ...
I-ODOR MAHHALA: Kufaka phakathi nemvelo emibili engashintshwa ...
Le nto iyathandeka kakhulu. Cha, impela. Ineqabunga elincane “elikhula” liphume phezulu njengesibambo sesivalo.
Kodwa uma sesidlulile kusici sokusika, lokhu empeleni kuyindlela enhle kakhulu kupheyinti lakho. Ingaphandle lakhiwe ngobumba, linebhakede langaphakathi lepulasitiki eliluhlaza. Isivalo esincane esihle sifihla isihlungi, naso.
Angisenawo umlandeli wepulasitiki wepheyile lami lomquba, kodwa kulokhu, mhlawumbe ngingenza okuhlukile. Uma ufundisa izingane zakho umquba, lokhu kungaba yisikhumbuzo esihle kakhulu. Futhi noma ngabe uhlala wedwa, kuzokwenza ubuqili!
IBIN entsha ye-OXO Good Grips Easy-Clean Compost Bin, White - 0.75 GAL / 2.83 L
Usayizi ovamile nokuklanywa kwansuku zonke ...
Isembozo siphendulela phezulu ukugcwaliswa okulula bese sidlulela phansi ku ...
Izindonga zangaphakathi ezibushelelezi zivimbela ukudla neziphuzo ...
Ebhakedeni lepulasitiki, imicabango eminingi yangena kule modeli. Yenzelwe kalula ukukhipha engqondweni. Kodwa ayenzelwe ukukhululeka kokuhlanzwa, okungukuwa kwayo.
Yebo, ungayigeza ngezandla, futhi isebenza kahle. Lokho kulula ngokwanele. Kodwa awukwazi ukubeka le modeli kumshini wokuwasha izitsha. Isendlalelo sangaphakathi sinamathele kwangaphandle, futhi asivalwanga kahle. Amanzi angakha phakathi kwezendlalelo.
Uma ugeza izandla kuphela, lokhu kungaba yindlela enhle kuwe. Iphethe izinkomishi eziyi-12 zikadoti, noma cishe u-3 / 4th wegalitha. Isivalo asinaso isihlungi, kepha sigcina iphunga liphansi. Yenzelwe ukuphenya okwenza ukwengeza imfucuza kube lula, futhi kungasuswa kungabi nalutho.
okufanele ukwenze ngosuku lwe-spa
Ngikhetha okuthile okuqinile kancane, kepha uma ufuna umgqomo omuhle wokuqala, lokhu kuyindlela ehloniphekile.
I-Relaxed Gardener Kitchen Compost Bin (0.8 Gallon) - Rust Proof and Leak Proof - Built Tough to ...
VULA NGESANDLA ESINYE! Uma ubufuna i ...
UBUFAKAZI BOKUVUZA! Inkinga ngeminye imigqomo yokwenza umquba ...
AYIKHO IPHUTHA! Ngokungafani neminye imigqomo edinga izihlungi ezimbili ...
Lokhu kungabukeka njengendlu yasepulazini, kepha kuyindlela enhle kakhulu yomndeni ojwayelekile. Ngaphansi nje kolitha wemfucuza kuzolingana kulo mgqomo ophefumulelwe obisi. I-plastic liner pail yenza kube lula ukukhipha imfucuza, futhi kukhona isihlungi kusembozo.
Ngithanda ukuthi basebenzise insimbi ngaphandle, kepha kimi kubonakala sengathi yehlula inhloso yokusebenzisa insimbi. Insimbi ayigcini iphunga noma ibala elifana nethini lepulasitiki. Bakhethe ukwenza ipheyile yangaphakathi ibe mnyama ngombala ukuvimbela ukungcola. Kodwa kuseyipulasitiki, futhi isengaba nezinkinga zephunga laphakade.
Ingaphandle lensimbi elihlanganiswe ne-powder linikeza ukubukeka kwe-rustic. Kanjalo ne 'COMPOST' ebhaliwe eceleni. Lokhu kungabukeka kumnandi ekhishini lendlu yokulima. Kungenzeka kungahlangani kahle namakhishi ezimboni, kodwa leso isitayela, hhayi ukusebenza.
Ngokusebenza, ngizonikeza amamaki aphezulu. Uma ufuna imodeli enebhokisi langaphakathi elisusekayo, lokhu kuyisinqumo esihle!
I-Gardenatomy Copper Ikhishi Umquba we-Bin Indlu Countertop - I-LARGE 1.3 Gallon Food Scrap Container, ...
UKUBALULEKA KAKHULU: Iningi lamaphakethe wekhompiyutha efika ...
ISITOLO SOKUPHAKATHI KWOKUDLA KWESITSHI:
UMBALA WESITOLO WOKUHLOLA: Qhubeka ... setha lokhu ...
Masibhekane nakho, iningi lethu lithanda amakhishi ethu ukuze abukeke emuhle. Futhi uma ungomunye walabo bantu onayo yonke i-cookware yethusi, okokuqala, nginomona. Kepha uzofuna okuthile okulingana nokuhlobisa kwakho.
Faka lo mgqomo omuhle womquba. Lokhu kuyefana nokwakhiwa kwemodeli ye-Epica engagqwali yensimbi engenamthungo. Kodwa-ke, yenziwe ngethusi ngokugcwele ukukhulisa ukubukeka kwayo. Iyacwebezela futhi ibushelelezi, izokwenza umsebenzi ofuna ukuthi iwenze.
U-angelina no-brad bahlukana ngo-2016
Inokuwa okufanayo nemodeli ye-Epica futhi. Kepha khumbula, ngisebenzisa i-Epica. Angikubheki ukungabikho kwephara yangaphakathi njengenkinga enkulu yale modeli.
Ngakho-ke uma ufuna okuthile okuzohlangana nezinkuni zakho ezimnyama namaketela ethusi, nangu umgqomo wakho! Futhi iyoba yinhle noma ngabe uyibeka kuphi.
UJoseph Joseph Compo 4 Ogcwalisa kalula Umquba Bin Ukudla Imfucuza Caddy nge Adjustable Air Vent, 1 amalitha / 4 ...
Izinto ezifakiwe: 1 x caddy yemfucuza yokudla; 1 x ...
Angiyena umlandeli wepulasitiki, kodwa ngingumuntu othanda abantu ukukhipha izinto ngaphandle kokubuka lapho befuna. Lo mgqomo wepulasitiki omncane uyanela lokho okudinga ngokuphelele. Idizayinelwe ukufaka ngaphakathi komnyango wekhabethe, ivumela umsebenzisi ukuthi afihle imfucuza yabo yasekhishini ekubukeni okungajwayelekile.
Lapho udinga ukuyisebenzisa, bamba isibambo bese usiphakamisa ku-hook yaso elengayo. Ungayiyisa ebhodini lakho lokusika bese uyigcwalisa, noma uyenze ukuze uyikhiphe. Futhi uma usuqedile, icasha ngokushesha kalula.
INorpro Ceramic Floral Blue / White Compost Keeper, 3-Quart
Izinyathelo: 10 'x 7' x 7 '/ 25.5cm x 18cm x 18cm ...
Okuhehayo, okuqinile nokuhlala isikhathi eside, umquba wobumba ...
Gcina amakhasi, amagobolondo amaqanda, izindawo zekhofi, itafula ...
Ubuhle bezinto zobumba abunakuphikwa. Kulabo bethu abathanda ukuba nolayini wabo wezimbiza zobumba esitobhini sasekhishini, lo mgqomo uzongena ngaphakathi.
Izikhalo zami ezinkulu ngale modeli ukuthi yakhelwe ukwakheka njenge-Epica, nesisindo sayo. Umumo muhle, kepha sonke isisindo sesibambo sizokulengiswa kusuka emaphoyinti amancane we-ceramic. Futhi izitsha zobumba ziyasinda ngisho noma zingalayishiwe ngezinkundla zekhofi ezishunqayo!
Ngisho nangokubhuka kwami ​​mayelana nalawo maphuzu amabili, lokhu kuseseyimodeli enhle. Ayinayo i-pail yangaphakathi, ngakho-ke kuzodingeka uyigeze kahle ngemuva kokuyikhipha. Futhi isihlungi singena ngaphakathi kwesembozo, sigcina iphunga liphuma ekhishini lakho.
Ukuthengiswa I-Bamboozle Food Compost Bin, Isithako Sokudla Kwangaphakathi Kwekhishi (Ngokwemvelo)
Yenziwe nge-biodegradable, dishwasher safe, futhi ...
Ubukhulu: 8 'x 6.25' x 9 '
Ngayinye ihlanganiswe ngephepha elihle lobuciko ...
Uma ufuna isixazululo semvelo, esingenayo i-BPA nesensimbi, umgqomo we-Bamboozle kufanele kube ukukhetha kwakho. Yenziwe ngoqalo lwe-bamboo, kuyinketho eqhubeka ngokuphelele, ekhululekile futhi.
Ngokwesitayela, lo mklamo uhambelana kahle nezindawo eziningi zasekhishini. Akubonakali, ngombala omhlophe ohlangene nezwe. Lolu phiko luphethe amalitha ayi-1.25 omquba futhi lungusayizi ohloniphekile.
Engikuthandayo ngayo yizici eziqhubekayo zokwakha nokubukeka kwayo. Engingakuthandi ukuthi ifayibha yoqalo ikwazi ukudonsa iphunga. Lokhu kuzoba ngcono uma usetshenziswa nezikhwama ezincibilika ukugcina iphunga lingagcini emgqonyeni wakho.
Isihlungi sekhabhoni esisembozweni kanye nesibambo soqalo esiqinile siyakuqeda. Zonke izinto ezicatshangwayo, uma uthanda isici sokusimama, lokhu kuyindlela enhle.
Ukuthengiswa Umgqomo Womshini Wekhitshi Ongenayo Iphunga Lomoya Ongenaphunga, Omnyama noMhlophe
Idizayini enelungelo lobunikazi ivumela umoya ukugeleza ngokungaphansi ...
Ivula kalula ngokucindezela inkinobho
Kulula ukuyihlanza futhi kungabi nalutho ngokungcola okuncane
Ngiqhubeka ngiphinda ukuthi angizithandi izigqoko zomquba zepulasitiki. Kepha yize ngingenawo, lena inezakhi ezinhle zokuklama.
Ngokuthinta, isivalo sakho esigcwele intwasahlobo sizovuleka, silungele ukwengeza okokusebenza. Isikhwama somquba singamiswa ngaphakathi ukuze kubanjwe imikhiqizo yakho kadoti. Futhi ukwakheka kwayo kuvumela umoya ukuba ugeleze usuka phansi komgqomo ubheke phezulu, unciphisa iphunga.
Iphinde igcine ukoma kokokusebenza kunomgqomo ojwayelekile, obambezela ukubola ekhishini. Ngenkathi ufuna lezi zinto zibhidlike ngokushesha, kungcono uma zikwenza enqwabeni noma emgqonyeni wezikelemu!
Le nketho inhle kakhulu kubantu abenza ikhofi nsuku zonke futhi banezizathu ezimanzi, ngoba ingabomisa kalula. Ama-peels amaningi noma umkhiqizo owonakele? Ayikho inkinga. Ukukhathazeka kwakho kuphela kufanele kube yizinto ezinamanzi ngempela ezivuza ngaphansi kwesikhwama sakho ngaphambi kokuthi zome.
I-Greenlid Compostable Bin Compostable - I-Starter Kit (i-30 Pack + esebenza kabusha
Vele ugcwalise nge-Waste yakho yokudla, bese ufaka umquba ...
Ubufakazi bokuvuza buqede iphunga
Iza neziqukathi ezingama-30, izivalo ezingama-30 ezihlanganayo kanye ...
Futhi manje sifika emgqonyeni-lowo-ongeyena-bin. Noma, kunalokho, ingumgqomo futhi ifolishi lomquba, futhi.
Uma ungumuntu okuthola kunzima ukuba nemfucuza ensundu eyanele emgqonyeni wakho, lokhu kungukukhetha kwakho. Squeamish ngokuhlanza i-gunk ku-pail yakho? Lokhu kuzokulungisa lokho, nakho.
Ngokungafani nawo wonke amanye amamodeli namuhla, wonke lo mgqomo uyenziwa futhi uphonswe ngqo enqwabeni. Susa isivalo ozosisebenzisa emuva kwesikhathi - iyagezeka ngomshini futhi ilungele ukugqoka elandelayo.
Wakhiwe ngokuphelele “nge-end of life cardboard”, lo mgqomo uyisigaba sokugcina ekusetshenzisweni kabusha kwamakhadibhodi. Ikhadibhodi ayikwazi ukuphinda isetshenziswe kaningi kunezikhathi ezimbalwa ngaphambi kokuthi ithathe umhlalaphansi. Futhi lo mgqomo uqinisekisa ukuthi inqwaba yakho yomquba iyindawo yokugcina yokuphumula yamakhadibhodi.
Uma unezinto eziningi ze-soggy, umgqomo ungahle uthambe noma uvuze. Kepha kumfucumfucu ovamile wasekhishini, lokhu kusebenza kahle. Futhi ngubani ongadingi ama-browns amaningi kudoti wabo oluhlaza?
Ukuthengiswa I-Third Rock Countertop Compost Bin ene-Lid - 1.0 Gallon Compost Bucket - I-Premium Dual Layer Powder ...
UKUMOSHA KAKHULU futhi uhambe ngobungane ngendlu ...
KUGCINA I-ODORS IN ngokulawula iphunga. Ukudla nezithelo ...
NGEKE RUST, ukuklwebha noma chip. Senze ...
Ukukhetha kwethu kokugcina kungenye ehlanganisa ukukhishwa kwekhishi nomgqomo osebenzayo. Le modeli ethile evela e-Third Rock yakhiwe ngensimbi yensimbi enesibambo esingenasivalo. Yakhelwe ukuhlala isikhathi eside, ingasetshenziswa noma ngaphandle kwezinsimbi zomquba.
Izongena ngamabhodwe akho, amapani, neziqukathi zokugcina ikhishi ngokukhululekile. Okungcono futhi, inesitayela esikhomba kalula esazisa izivakashi lapho zingalahla khona izithelo zazo kanye nemfucumfucu yemifino. Ukuhlanza kungumoya, njengoba umzimba wayo wensimbi ungagezwa ngesandla ngensipho namanzi.
Izihlungi zekhabhoni zihlala ngaphakathi kwesivalo, zivimbela lawo maphunga angajabulisi ukuba aphume. Futhi ngokuthembeka, uma kubukeka kukuhle, kufanelana nobuhle bakho, futhi kuzohlala unomphela, kuzokulungela!
Umgqomo wokuphala wekhompiyutha ungenziwa ukuze uthuthele emgqonyeni wezikelemu noma kumhlanganisi.
Ake sikhulume ngokuthi iyiphi i-counter compost pail… nokuthi yini okungeyona.
Ukuze i-newbie ifake umquba, kungaba ukucabanga okulula ukuthi umgqomo wekhompiyutha wekhompuyutha konke okudingayo. Ngemuva kwakho konke, kubizwa ngokuthi yibunda lomquba, akunjalo?
izikweletu, izikweletu, izikweletu
Kodwa awufuni ngempela ukwenza umquba ojwayelekile ekhishini lakho. Okokuqala, imfucuza yasekhishini ibhekwa njengemfucuza eluhlaza. Udinga ukulinganisela imfucumfucu yakho eluhlaza kanye nsundu ukuze wenze umquba omuhle. Futhi kwesinye, kunuka.
Ukwenza umquba waseBokashi futhi ukufaka umquba kungenziwa zombili ezindlini kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Labo basebenzisa amasu ahlukene. Ngokuphambene nalokho, ikhompiyutha yakho yasetafuleni kufanele isetshenziselwe ukuqoqwa.
umqondisi omuhle kakhulu webala lesikhumba sase-african 2020
Lapho usuthole umgqomo wetheyisi ongaphelele noma ogcwele ngokuphelele, ungawuthwala lapho uwudinga khona. Uma une- umgqomo wesikelemu , yitotele laphaya bese udlisa izimpethu. Ingabe unayo umquba we-tumbler ? Hamba ungeze obunsundu nemifino bese uyinika izipikili ezinhle.
Ngemuva kokuhlanza i-pail yakho yomquba, ingabuyela emuva ekhishini ngeqoqo elilandelayo. Futhi kuyohlale kuneqoqo elilandelayo!
Kunezici ezimbalwa kuphela ezijwayelekile kumakhi wekhishi, ngakho-ke akunzima ukukhetha izinketho zakho.
Isici esivame kakhulu uhlelo lokuhlunga. Lokhu kuhle futhi kubi. Zizinhle ngoba njengoba ukudla okusanhlamvu kuphuka (ikakhulukazi u-anyanisi), ziyanuka. Isihlungi sivimbela ukunuka kokuzungeza ikhishi lakho. Kepha badinga okushintshwa njalo.
Kweminye imigqomo yomquba, kukhona ne-liner yangaphakathi. Lokhu kuhle ukugcina i-pail yakho ihlanzekile, kepha kungaba nzima ukususa lapho ulayishwe ngokugcwele. Uma usebenzisa izikhwama zomquba , kulula kakhulu ukukhipha umgqomo.
Izibambo ziyatholakala emigqonyeni eminingi, kodwa hhayi yonke. Imvamisa, lawo anebhokisi langaphakathi yilawo angenazo izibambo ngaphandle. Yize lokhu kuyisitayela kunanoma yini enye, kuyasiza ukuba nesibambo esihle uma uzosikhiphela ngaphandle.
Okwenziwe ngebhakede lakho lomquba kungaba nomthelela empilweni yalo ende nasekusebenziseni kwayo.
Umgqomo womquba wasekhishini we-DIY uvame ukwakhiwa ngokhuni. Ngenkathi lokhu kusebenza empeleni, ukhuni lumunca noma yimuphi umswakama ovuza ezishibini zasekhishini lakho. Lokho kusho ukuthi umgqomo wakho uzoqala ukunuka imfucuza yasekhishini. Akumnandi kakhulu, akunjalo?
Insimbi iyona evame kakhulu, ikakhulukazi insimbi engagqwali noma i-aluminium. Izinsimbi zensimbi kulula ukuzihlanza, kepha uma kungeyona insimbi engagqwali noma i-aluminium, ingagqwala. Qiniseka ukuthi uyazi ukuthi i-pail yakho yenziwe ngensimbi enjani.
I-Ceramic iyindlela ethandwayo yokuhlobisa ikhishi, futhi ingasebenza kahle kakhulu. Inkinga ngalokhu ukuthi i-ceramic ivame ukusinda kunensimbi. Uma ine-pail yangaphakathi, lezi zibukeka zizinhle futhi zisebenza kahle. Kepha uma kufanele ukhiphe yonke imbokodo ukuyikhipha, kungaba ngumzamo omkhulu kakhulu.
Ungakhohlwa amapulasitiki! Kunezinketho ezimbalwa zepulasitiki ezinhle ezikhona njengamanje. Okubi ngeplastikhi ukuthi imvamisa zihlala ziqinile kancane. Umgqomo wakho wepulasitiki ungahlala iminyaka embalwa kuphela, futhi lapho ekugcineni ulikhahlela ibhakede (ngomqondo ongasho lokhu), uzodinga elisha.
Ekugcineni, sonke sidinga umgqomo obukeka umuhle ekhishini ngenkathi uqoqa imfucuza yethu. Kunezinhlobonhlobo zezinketho laphaya. Izincomo zami yizo zonke izinhlobo ezihlangabezana nazo zombili izidingo zesitayela nokusebenza. Ngemuva kwakho konke, uma ingenzi umsebenzi wayo futhi ibukeka kabi, akuyona ekhishini lakho!
ngabe kufanele ugqoke izingubo zangaphansi ngaphansi kwamaphijama
isho ukuthini ingqikithi ye-met gala
izinzuzo zokushefa indawo yasesidlangalaleni yowesifazane